हात सफा र स्वच्छ बनाउन ८ विशेषज्ञ सुझावहरू - NepalDainik
हात सफा र स्वच्छ बनाउन ८ विशेषज्ञ सुझावहरू
विशेष गरी हात धुनु, सबै प्रकारका कीटाणुहरू विरुद्ध सुरक्षित हुन्छा । हातको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न यहाँ केही  सुझावहरू:
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि कीटाणुहरू मुख्य रूपमा हाम्रा हातहरूबाट सर्छन् र सफा र स्वच्छ तरिकाले हात धुँदा सामान्य रूपमा संक्रामक रोगहरू रोक्न अविश्वसनीय रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ । युनिसेफका अनुसार हामीले कोभिडबाट संक्रमित हुने सम्भावनालाई कम गर्न सक्छौं। covid -19 द्वारा 36% राम्ररी हात धुनु संक्रमणको फैलावटबाट बच्न र रोगलाई खाडीमा राख्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो। यसबाहेक, अध्ययनहरूले पत्ता लगाएको छ कि साबुन पानीले हात धुँदा3मध्ये 1 जनालाई पखाला लाग्नबाट र5मध्ये 1 जनालाई श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग लाग्नबाट जोगाउन सकिन्छ ।
महामारीको चरम उत्कर्षमा परेको देखिए पनि सबै किसिमका कीटाणुहरूबाट सुरक्षित रहनका लागि हात धुने राम्रो सरसफाइ विशेषगरी हात धुने आधारभूत कुरा भएकाले हात धुने र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
1. जहिले पनि सम्भव भएसम्म साबुन र पानीले हात धुनुहोस्, विशेष गरी आफ्नो अनुहार छुनु अघि, खाना खानु वा कुनै पनि प्रकारको घाउको उपचार गर्नु अघि। साथै लिफ्ट बटन वा ढोकाको ह्यान्डलहरू जस्ता दूषित हुन सक्ने सतहहरूलाई छोएपछि आफ्नो हातहरू धुनुहोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा वा नाक फुकेपछि हात धुनुहोस् ।
2. हतारमा आफ्नो हात कहिल्यै न धुनुहोस्। यो हो जहाँ हामी मध्ये धेरैजसोको गल्ती हुन्छ, तर यो हात स्वच्छता मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो। आफ्नो हात, नाडी, र आफ्नो औंलाहरू बीच साबुन र पानी कम्तिमा 20 सेकेन्डको लागि स्क्रब गर्नुपर्छ । आफ्नो हातको पछाडि र नङ मुनि पनि स्क्रब गर्न नबिर्सनुहोस् ।
3. साबुन वा तरलहरुको प्रयोग गर्नुहोस् र प्राथमिकतामा तुलसी, एलोभेरा र कागतीको राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि तिनीहरूमा छालालाई कन्डिसन गर्ने र कीटाणु मार्ने गुणहरू छन् जसले कीटाणुहरू हटाउन मद्दत गर्दछ र तपाईंको हातलाई पोषण दिन्छ ।
4. आफ्नो हात पूर्ण रूपमा सुकाउनुहोस्। आफ्नो हातलाई भिजाउन नदिनुहोस् किनकि ओसिलोले ब्याक्टेरिया र कीटाणुहरू फैलिने सम्भावना बढाउन सक्छ।
5. आफ्नो हात सफा तौलिया वा टिस्युले पुछ्नुहोस् वा तिनीहरूलाई हावामा सुक्न दिनुहोस्। सार्वजनिक शौचालयमा ह्यान्ड ड्रायरहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि तिनीहरूले धेरै कीटाणुहरू फैलाउँछन्।
6. कीटाणुहरू विरुद्ध सुरक्षाको लागि ह्यान्डवाइपको प्याकेट बोक्नु राम्रो हुन्छ। एलोवेरा, तुलसी र कागती जस्ता प्राकृतिक सामग्रीहरू प्रयोग गरीएको खोज्नुहोस्, किनकि यी जडीबुटीहरू तिनीहरूको छाला-कन्डिसनको लाभहरूको लागि परिचित छन् र हातहरू नरम बनाउन मद्दत गर्छन्।
7. साबुन र पानीले हात धुनु भनेको कीटाणुहरूबाट छुटकारा पाउने उत्तम तरिका हो। यद्यपि, सेनिटाइजरको सानो बोतल बोक्नु उपयोगी हुन्छ जब तपाईंसँग पानी र साबुनको पहुँच हुँदैन। धनिया, उशिरा, नटग्रास, नीम, र स्पिक्ड जिंजर लिली जस्ता प्राकृतिक सामग्रीहरू भएका सेनिटाइजरहरू खोज्नुहोस्, किनकि यी जडीबुटीहरू तिनीहरूको कीटाणु-मार्ने गुणहरूका लागि परिचित छन् र नरम र कीटाणुरहित हातहरू सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छन् ।
8. वयस्कहरूलाई हातको सरसफाइको आधारभूत ज्ञान हुन सक्छ, आमाबाबुले बच्चाहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ र कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म माथि उल्लिखित सही प्रविधिद्वारा हात धुने महत्त्व सिकाउनुपर्छ।
"हातको सरसफाई हाम्रो जीवनभर पालना गर्नुपर्ने नियम हो र पहिलो चरण भनेको सफा हात र स्वस्थ शरीर सुनिश्चित गर्न लागू हुने नियमहरू पालना गर्नु हो र यसरी नै सुखी जीवन बिताउन सकिन्छ।"
PrevPreviousछोराछोरिलाई बिष खुवाएर आत्महत्या
Nextनेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न कांग्रेसको जित आवश्यक-महामन्त्री गगनकुमार थापाNext